दलितले प्रेम गर्नु अपराध हो ? – Palika Times
दलितले प्रेम गर्नु अपराध हो ?
चुनु केसि २ असार २०७७, मंगलबार प्रकाशित
२ असार, काठमाडौं । जन्म, प्रेम र मृत्यु सबैका लागि समान छन् । यी जात र धर्म अनुसार फरक हुँदैनन् । र, यसलाई रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिंदैन !
प्रेमको इतिहासमा नवराज बिक अमर रहनेछन् । यस्ता घटनाहरु धेरै थिए होलान् तर अहिलेसम्म मैले सुनेको २१ औं शताब्दीको नेपाली प्रेमीप्रेमिकाको इतिहासमा अनौठो र अपत्यारिलो घटना हो जस्तो लाग्छ । दुःखको कुरा २१ औं शताब्दीमा पनि हामी र हाम्रो नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरामा हामी अन्योलमा नै रुमलिएका छौं । विभिन्न समयमा कहिले जातीयताको कुराले, कहिले धर्मको कुराले, कहिले लैंगिक हिंसाको कुराले र कहिले राजनीतिक हिंसाको कुराले हामी पिरोलिदै आएका छौँ ।
हाम्रो समाजमा यसैगरी धर्म, जातजातिमा भेदभाव र विभेदहरु गर्दै शक्तिशालीहरुले शक्तिविहीनहरुलाई थिचोमिचो र काटमार, झैझगडा गर्दै जाने हो भने पेरु र रुवान्डामा जस्तै जातीय र धार्मिक युद्ध ननिम्तेला भन्न सकिंदैन ।
अहिलेको नेपाली कानुनको नजरमा विवाह गर्न केटी (मल्लकी छोरी)को उमेर पुगेको देखिंदैन । मेरो विचारमा विवाह १५ वर्षको उमेरदेखि आफ्नो इच्छाले गर्न पाउनुपर्दछ तर जबर्जस्ती हैन । प्रकृतिले दिएको बरदान बिपरीत जान खोज्नु वा जवर्जस्ती रोक्न खोज्नु भनेको अपराध हो । प्रकृतिले यही भन्दछ कि पुरुषहरु १३ बर्षदेखि र महिलाहरु उसको पहिलो रजस्वला भएदेखि नै विवाह गर्न र शारीरिक सम्पर्क राख्न योग्य ठहरिन्छन् ।
प्रेमविवाह गर्नु भनेको एकले अर्कालाई चिनेर अनि जानेर गर्नु हो । प्रेम हुनका लागि न त उमेरले छेक्छ, न त जातले छेक्छ, न त धर्मले रोक्छ, न त रुपले रोक्छ, न त शरीरले रोक्छ, न त धनसम्पत्तिले छेक्छ, न त भौगोलिक दूरीले नै रोक्छ । प्रेम आफंैमा पवित्र छ । र, यो चाहेर मात्रै हैन, कहिलेकाहीँ नचाहँदा नचाहँदै पनि हुन्छ ।
अनायासै आँखा जुध्न पुग्दछ र एक अर्कामा मन र मस्तिष्कको कनेक्सन हुन्छ । अनि जहाँ धड्किए पनि दुबैको मन र मुटु एकै पटक धड्किन्छ र एक अर्कामा नछुटिने बाचा कसम खाँदै जीवन सँगै जिउने प्रण गरिन्छ । प्रेम गर्नु अपराध होइन र प्रेमीप्रेमिका अपराधी होइनन् ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ स्थायी बसोबास गर्ने नवराज बिकको हत्याको घटनाले मेरो मनमा एकप्रकारको नमिठो हलचल मच्चिएको छ । अहिलेको गणतान्त्रिक युगमा पनि हाम्रो समाजमा कति विभेद छ ? के एउटा दलितको प्रेम गर्ने मन हँुदैन ? उनीहरुको मन ढुङ्गामुडाले बनेको हुन्छ ? प्रेम अभिषाप होइन बरदान हो । जन्म, मृत्यु र प्रेम सबैका लागि समान छ र सबैका आफ्नै अधिकार छन् अनि आफ्नै नियम छन्, आफ्नै कानुन छन्, आफ्नै संसार छ ।
एउटा दलितको छोराले मल्ल वा क्षेत्रीकी छोरीसँग दोहोर प्रेम गर्नु कानुनको नजरमा पनि अपराध थिएन । तर त्यो समाजमा निच सोच देखियो । यसरी नवराज विकसहितलाई भेरी नदीमा धकेल्ने दोषीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।
अहिलेको युगमा आएर यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन, दलित भनेर हेप्न पाइँदैन । तर दलितले पनि गल्ती गरेको खण्डमा कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ र कानुनी कारबाही पक्कै हुन्छ । तर समाचार सुनेको आधारमा र विभिन्न पत्रपत्रिका पढेका आधारमा यहाँ केटीपक्षकै गल्ती देखिन्छ । केटीसँग सल्लाह भए बमोजिम नै केटापक्ष केटीलाई लिन आएको देखिन्छ । जवर्जस्ती गरिएको देखिदैन । किनकि ३ बर्षदेखि केटा र केटी प्रेममा छन् । एक अर्काको घरमा जाने आउने गर्ने गरेको र पहिला नै केटीलाई केटाले लगिसकेको भन्ने सुनिन आएको छ । उनीहरु एक अर्कामा श्रीमान श्रीमती भैसकेका रहेछन् शारीरिक र मानसिक रुपमा ।
विवाह समाजलाई देखाएर गरे मात्रै विवाह हुँदैन, मनलाई साक्षी राखेर एक अर्काबीचमा पनि विवाह हुन्छ । समाज साक्षी राखेर विवाह गर्नु भनेको त्यो समाजबाट अनुमति पाउनु मात्रै हो, शारीरिक सम्पर्क गर्नका लागि र सन्तान जन्माउनका लागि । विक र ती मल्ल किशोरीले समाजले दिने अनुमतिपत्र मात्रै लिन बाँकी रहेछ र त्यही लिन भनेर ऊ आयो त अरु के बिगार्योे ? अब नवराजलाई मारेपछि त्यो केटीको बाबुआमा, दाजुभाइ र त्यो क्रुर समाज चोखो भयो ?
यो घटना अत्यन्तै निन्दनीय छ । कसैले पनि कानुनलाई खरिद बिक्री नगरिकन निष्पक्ष छानबिन होस् र पीडितहरुले न्याय पाऊन् । नवराज विक सहितका मृतकको आत्माले शान्ति पाओस् ।
भारत छिर्न लागेकि सरिता गिरीलाई नाकाबाट फर्काइयो